Mpamatsy Pcb matetika ary mpamokatra Pcb matetika
High Frequency PCB dia karazana PCB ampiasaina amin'ny fampitana signal amin'ny karazana fampiharana ao anatin'izany ny finday, microwave, matetika ny radio ary ny fampiharana haingam-pandeha haingam-pandeha.
Ny takelaka hafanana avo lenta dia miaraka amina laminate matetika matetika satria sarotra ny mamorona satria mila mitazona hafanana hafanana amin'ny fampiharana izy ireo, raha jerena ny fahatsapana ny famantarana.
Ny fitaovana manokana dia ampiasaina hahatratrarana ny hafanana avo lenta nomen'ny High Frequency PCB.
Ny toetra mampiavaka ny tabilao avo matetika dia mety hisy vokany amin'ny fahombiazan'ny famantarana rehetra, toy izany koa ny fiovana amin'ny sandan'ny Eran'ny akora ampiasaina izay mety hisy fiatraikany amin'ny fisakanan'ny tabilao.
Ny ankamaroan'ireo matihanina dia aleony fitaovana diélectrique rogers satria hita fa lafo kokoa io, ambany ny sandan'ny DK sy DF, mihena ny fatiantoka ary toa mety amin'ny fampiharana noforonina sy prototyping.
Teflon dia fitaovana iraisana ampiasaina amin'ny fizotry ny famokarana PCB matetika, izay miaraka amin'ny 5GHz matetika. Raha ny resaka DK, DF ary ny fatran'ny rano, ny Teflon no tsara indrindra, nefa lafo kokoa noho ny FR4.
Raha mitaky matetika mihoatra ny 10GHz ny tetikasanao miaraka amin'ny kalitao avo kokoa sy ny mari-pamantarana marimaritra iraisana, dia i Teflon no safidy tsara indrindra.
Ireo mari-pamantarana matetika dia marefo amin'ny tabataba ary miaraka amin'ny fandeferana tsy azo ihodivirana mafy kokoa raha ampitahaina amin'ny tabilao mahazatra.
2 Layer Bare Board , Mutilayer PCB , malefaka faritra Natonta Board , Quick Fiolahana PCB , Mutilayer Fpc , Natonta Faritra Board ,